Miarahaba ny lalàna vaovao momba ny fiarahan’olona samy lahy/vavy ny vondrom-piarahamonina LGBTI · Global Voices teny Malagasy
Mampitandrina ny mpikatroka fa tokony hampiharina amin'izay ny lalàna
Voadika ny 07 Jolay 2020 4:51 GMT
Mpikatroka Montenegrin tao amin'ny 2013 SeaSide Pride in Budva, mitazona sora-baventy mivaky ho “tahaka anao aho,” “ho amin'ny mariazy ara-drariny,” “Love is love,” ary “Mifidy ny fitiavana aho.” Saripikan'ny LGBT Forum Progres, CC BY-NC-SA.
Nolanian'ny parlemantan'i Montenegro ny lalànan'ny fiarahan'olon-droa samy lahy/vavy mandritra ny fiainana, izay mametraka an'i Montenegro ho firenena voalohany ao Balkans Andrefana ho nankatoa ho araka ny lalàna ny mariazin'ny samy lahy/vavy.
Tsy tafiditra tao amin'ny lalàna nolaniana tamin'ny voalohany jolay ny fiomanana hamela ireny olon-droa samy lahy/vavy ireny hananga-jaza. Any amin'ny zavatra hafa rehetra kosa dia mitovy amin'ny zon'ny olon-droa lahy sy vavy ny zon'ny olon-droa samy lahy/vavy, ka ao anatin'izany ny zom-pananana, handova, ny fiarovana ara-pahasalamana sy ara-tsosialy.
Nitehaka tamin'ny fandaniana ity lalàna ity ny FTMF LGBT Forum Progres sy ny Foibe ara-tSosialy LGBTIQ, sy ireo vondrom-piarahamonina ao amin-dry zareo isa-paritra, miarahaba ny olona LGBTI rehetra amin'izao fanatrarana mana-tantara izao:
Manana lanja tsy hita visavisaina ny hagoavany ho an'ny olona LGBTI rehetra eto Montenegro ny fahitana fa laniera ihany tamin'ny farany ny lalànan'ny fiarahana mandritra ny fiainana. Fivoarana goavana izany izay nahafeno fifaliana ny vondrom-piarahamonina LGBTI iray manontolo ho an'ny fiaraha-monina Montenegrina. Amin'ny maha-fikambanana izay manandratra teny ho fankatoavana araka ny lalàna ny firaisan'ny samy lahy/vavy, sy amin'ny maha-mpandray anjara mavitrika azy amin'ny Vondron'Asa izay nanangana io volavolan-dalàna io, ampoka hafaliana tokoa izahay amin'ity vokatra nandrasana hatry ny ela ity. Ankehitriny dia olona lehibe iray no mitoetra — ny fampiharana ity lalàna ity, izay ho dingana goavana iray manaraka amin'izao fizorana amin'ny fiarovana ny zon'ny olombelona LGBTI izao.
Lalan-davitra ny nodiavin'i Montenegro tamin'ny ady hanoherana ny “homophobia” tao anatin'ny taona maro.
Tamin'ny taona 2013 ny Diabem-Pireharehana Voalohany nahitana herisetra ara-batana, fandrisihana hamono sy ireo fihoaram-pefy ambava hava avy amin'ireo mpanohitra ny fihetsiketsehana miisa 200 eo ho eo.
Tamin'ny taona 2015 ny manampahefana Montenegrina nandrara ny Diabem-Pireharehana noho ny fiheverana izany ho “mampanahy loatra”, tamin'ny filazàn'ny polisy fa mety tsy hiaro ny diabe amin'izay mety ho fandrahonan'ny vondrona hômôfôby hampiasa herisetra.
Vao haingana indrindra, vita tsy nisy fanohintohinana ny Diabem-Pireharehana taona 2017, raha nahitana ireo olona ambony ara-politika kosa ny iray notontosaina tamin'ny taona 2018.
Tamin'ny herintaona ny parlemanta tsy nahavita nampandany ny volavolan-dalànan'ny fiarahan'ny samy lahy/vavy noho ny tsy fahampian'ny quorum (fetran'isa ambany indrindra amin'ny mpivory).
Ny Filoha Milo Đukanović, izay nitazona ny toeran'ny mpanatanteraka ambony indrindra ao amin'ny governemanta Montenegrina hatramin'ny taona 1991, niarahaba ny fivoarana, manoritsoritra azy io ho porofo fa mizotra mankany amin'ny “demaokrasia mivelatra indrindra eto ambonin'ny tany” ny firenena.”
Dingana iray hafa ny nataon'i Montenegro mankany amin'ny fiarahana amin'ireo demaokrasia mivelatra indrindra eto ambonin'ny tany! Sambany i Montenegro no nampiditra ho ara-dalàna ny vondrom-piarahamonina samy lahy/vavy tamin'ny fampandaniana ny lalànan'ny fiarahan'olondroa samy lahy/vavy mandritra ny fiainana!
Niarahaba tamin'ny fandaniana ny lalàna ihany koa ny Praiminisitra Duško Marković.
Dingam-pandrosoana goavana mankany amin'ny lalana marina izao ho an'ny fiarahamonina Montenegrina, ny fahamatorany ara-demaokratika sy ny fizotram-piatiany. Vatom-panorenan'ny soatoavina mahaolombelona sy eoropeana ny fitovian-drariny sy ny fitovian-jo. Tiako isaorana ny vondrom-piarahamonina LGBTIQ tamin'ny fifampiresahana sy tamin'ny fandraisana anjara. Tsy misy eto ny mety ho efitry ny fanilikilihana miorina amin'ny fironana ara-pananahana ao amin'i Montenegro Eoropeana.
Niarahaba ny fandaniana izao lalàna izao ihany koa ny ambasadaoron'i Etazonia sy ny Fanjakana Mitambatra.
Na izany aza ny mpikatroka Bojana Jokić avy amin'ny LGBT Forum Progress nanome feo naotim-pitandremana raha mijery ireo famerana nampiharina vao haingana amin'ny famoriam-bahoaka :
Na dia zavatra lehibe ho an'i Montenegro aza ny latsabato androany, dia tiako ny hilaza fohy ireo olana nitranga tao anatin'ny volana maromao izay nampihovotrovotra ny fiarahamonintsika. Amin'ny maha-mpikatroka sy maha-olompirenena dia miahiahy aho amin'ny famerana ny zon'olombelona sy ny fahafahana, izay mampahatsiahy ahtsika fa tsy misy ny afaka sy mahazo rariny raha tsy ny rehetra ao amin'ny fiarahamonina no afaka sy mahazo rariny.